I-Finesse: Faka, Yongeza iiMveliso, Yenza iMali. | Martech Zone
NgoLwesine, Julayi 2, 2015 NgoLwesithathu, Julayi 1, 2015 Douglas Karr
Sonke siqhele ukusetyenziswa kuqwalaselo lwe-ecommerce olubandakanya iphepha lemveliso kunye neethayile zeemveliso kunye namaphepha emveliso esemgangathweni ngaphandle kweefoto, iinkcazo kunye nokuphononongwa. Amava okuthenga kwakudala athathelwa indawo ngamava amahle okuthenga afaka zonke izinto zenkqubo enomxholo kunye namandla e-ecommerce system.
The Umxholo weFinesse kuba WooCommerce ngumzekelo ogqibeleleyo wesi sizukulwana sitsha sala mava okuthenga.
IFinesse yi WooCommerce Umxholo wenziwe ukuthengisa. Yenziwe ukusuka emhlabeni ukuba ibe ntle, ibhetyebhetye kwaye ilungele uguquko. Ukuba uhlala ufuna ukubanakho ukuthengisa iimveliso zakho ngendlela yakho, uFinesse ngumxholo wakho!
Iimpawu eziphambili zomxholo weFinesse ovela kwiiVenkile zeVenkile
Ukusekwa okulula -Faka iFinesse, yongeza ilogo yakho kwaye uqalise ukongeza umxholo wakho.
Umxholo iibhloko -Yongeza iibhloko ezinemvelaphi ephilayo egqunywe ngekopi yakho yokuthengisa ukuze uzobe abathengi bakho. Yenza unxibelelwano nabo usebenzisa ividiyo.
Iifjethi eziguqukayo -Faka iimveliso apho ufuna khona, okanye ushiye iindawo ongazifuniyo. Awukhawulelwanga kubeko olusetwe kwangaphambili.
Amaphepha okufika angenamkhawulo -Yila amaphepha amaninzi okufika njengoko ungathanda ukuba nawo. Yenza iphepha ngokukhethekileyo kwigama ngalinye lophendlo oluphambili. Ngale ndlela iindwendwe ezivela kuGoogle ziya kuya ngqo kumxholo abawukhangelayo.
mobile -Yenzelwe ukusuka emhlabeni ukuya kuthi ga ngokugqwesileyo kubukhulu bescreen kunye nescreen. Ingumxholo onqabileyo owenza kakuhle zombini.
Ukuguqulwa kulungiselelwe -Ususe ukuhamba kunye namawijethi ekuphumeni ukuze uqiniseke ukuba abasebenzisi abacofe kude ngaphambi kokugqiba ukuthenga kwabo.
ngokukhawuleza -Iyilelwe ixesha elikhawulezayo lokulayisha iphepha ukuphucula ukukhangela kunye nokuguqula.
Njengoko ubona ngezantsi, ngumxholo omangalisayo:
Ukubhengezwa: Siyinxalenye ye Uyilo lweevenkile.
tags: ukugqibaUyilo lwevenkilewoocommerceimixholo woocommerce
MonsterConnect: Hlawula iQela lakho lokuThengisa ukuVala, ungacofisi